Qatar waxay fureysaa in ka badan 100 hoteel oo cusub FIFA 2022 Koobka Adduunka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Qadar » Qatar waxay fureysaa in ka badan 100 hoteel oo cusub FIFA 2022 Koobka Adduunka
Airlines • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • Shirarka • News • Wararka Qadar • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Dalka Qatar oo ka kooban 184 hanti ayaa ka kooban ku dhawaad ​​32,000 furayaasha qolka.
Qatar ayaa isku diyaarineysa inay martigeliso Koobka Adduunka ee Qatar 2022.
Guryaha soo socda ayaa qayb ka ah istaraatiijiyadda Qatar ee ah in la kala duwo wax -bixinteeda iyo ballaarinta rafcaanka dadka soo booqda.
Qatar waxay ballaarineysaa dalabkeeda dalxiiska ee caalamiga ah si waafaqsan Hiigsiga Qaranka Qatar 2030.
Qadar ayaa ku dartay 105 hoteel oo cusub iyo guryo hoteel hoygeeda hore oo aad u ballaaran, iyadoo waddanku isu diyaarinayo inuu martigeliyo Koobka Adduunka ee Qatar 2022 ™. Guryaha cusub ayaa ballaarin doona codsiga Qadar ee socdaalayaal kala duwan waxayna kor u qaadi doontaa waayo-aragnimada booqdaha, iyada oo Dalxiiska Qadar uu sii wado hawshiisii ​​ahayd in uu dalku u rogo meel ay dunidu hoggaamiso.
Mid ka mid ah furitaankii hoteelka ee xiisaha lahaa dhowaan waa Banyan Tree Doha, oo ah hanti raaxo leh oo shan xiddigle ah, oo si xarrago leh uu u naqshadeeyay naqshadeeyaha caanka ah ee Jacques Garcia. Furitaanka hoteellada ee ku beegan sannadkan waxaa ka mid ah, tusaale ahaan, Pullman Doha West Bay, oo ah shan-xiddigood oo ah Accor; JW Marriott West Bay, oo leh indho-qabasho iyo bannaanka sare; iyo Steigenberger Hotel, oo caan ku ah soo dhaweyntiisa gaarka ah. Mid kasta oo ka mid ah hoteelladaan cusub ayaa wax-ku-oolnimo ama waayo-aragnimo gaar ah u leh Qatar oo ah 184-hanti oo xoog leh, oo ka kooban ku dhawaad ​​32,000 furayaasha qolka.
Kooxda Qatar Airways Madaxa Fulinta ahna Guddoomiyaha Dalxiiska Qadar, Mudane Akbar Al Baker, ayaa yiri: “Waxaan sii wadnaa ballaarinta dalabka dalxiiska si aan u hubinno in martidu ay ku raaxeystaan ​​sida ugu wanaagsan ee martigelinta Qadar iyagoo awood u leh inay doortaan hoteel, dalxiis ama guri adeeg leh oo ku habboon miisaaniyaddooda iyo baahidooda. Guryahan soo socda ayaa qayb ka ah istaraatiijiyadeena aan ku kala duwaynayno bixintayada oo aan ku ballaarineyno rafcaankayaga martida. Waxaan ku faraxsannahay inaan ballaarinno dalabka dalxiiska ee caalamiga ah si waafaqsan Hiigsiga Qaranka Qadar 2030 iyo inay siiyaan dadka safarka ah fursado badan si ay ula kulmaan sida ugu fiican Qatar. ”
Banyan Tree Doha oo ah xiddig shan xiddigle ah oo dhowaan la furay ayaa magaalada dhexdeeda ka bixineysa meel raaxo leh.
Isku -darka shaqada iyo ciyaarta, Pullman Doha West Bay oo leh 375 qol iyo suuli iyo 93 guri ayaa la furi doonaa dabayaaqada sanadkan.
Kuwa raadinaya inay soo jiidaan aragtiyaha cirka Doha ayaa dhowaan awood u yeelan doona inay ku raaxaystaan ​​joogitaanka 53-dabaq JW Marriott West Bay.
Dadka socotada ah ee raadinaya hoy ku dhow garoonka diyaaradaha ayaa awoodi doona inay ballansadaan mustaqbalka 204-qol ee Steigenberger Hotel Doha.
Isabelle Cote wuxuu leeyahay,
September 3, 2021 at 16: 29
Ugu dambeyntiina waxaa la helay xulashooyinka hoteellada ee Qatar 2022… 4-5 habeen ugu yar… Waxay doonayeen 30 ilaa 40 habeen oo ugu yar Koobka Adduunka ee FIFA. Taasi waxay ahayd RIDICOULUS, way ka noqdeen… http://www.WorldCupStadiumHotels.com , ma aha raqiis laakiin waa hudheelo hufan oo ka raqiisan wax kasta oo aan arkay… 2 SANO oo raadinaya Hoteelada Doha… OMG !!!